musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Inotangazve Isinomira Atlanta-San José Vols
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kudzoreredzwa kubatana neWorld's Busiest Airport kunosimudzira kuwanikwa kwepasirese kweSilicon Valley's Airport.
Ndege yeusiku inobuda San José na10: 55 PM (PST), vachisvika muAtlanta maawa angangoita 4.5 gare gare na6: 30 AM.
Delta Air Lines kushandisa Boeing 757 ndege paSan José-Atlanta ndege.
Delta Air Lines yakamisa basa pakati peSJC neATL muna2020 nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Kutanga manheru ano, vafambi vanonakidzwa nekuwana mukana nekureruka pavanobhururuka kubva kuSan José kuenda kuAtlanta. Vakuru pa Norman Y. Mineta San Jose International Airport (SJC) yazivisa nhasi iro rezuva nezuva risingamire sevhisi ku Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) inotangazve Delta Air manheru ano.
Ndege yeusiku inobuda San José na10: 55 PM (PST) inokwira ndege yeBoing 757, ichisvika muAtlanta maawa angangoita 4.5 gare gare na6: 30 AM (EST).
Airport vakuru vanoratidza kuti yakasimba yezhizha traffic, kudzoka nendege, uye kuvhurwazve maresitorendi, zvitoro, uye mvumo zvinoratidza kusimba kweSJC nevemabhizimusi vayo. Ipo iyo State yeCalifornia yabvisa zvimwe COVID-19 zvinodiwa, vafambi vachiri kufanira kupfeka masiki, uye iyo Airport inoramba ichikurudzira kutenderera kwenzanga.
"Kudzorera sevhisi kuAtlanta kunomiririra chiitiko chakakosha pakurapa kwekufamba," akadaro John Aitken, Director kuMineta San José International Airport. "Ndiko kutanga kwechipiri kweDelta mumavhiki mashoma, uye vakaita basa rakakura rekuronga nekuunza zvakare misika yakakosha pamwe chete nekuwanda kwevhoriyamu." Hartsfield-Jackson Atlanta International ndiyo nhandare yakanyanya kubatikana pasi rose, uye tinofara kuyananiswa pamwe chete neguta reAtlanta pamwe nenzvimbo dzepasi rose dzenzvimbo dzainosvika. ”
Atlanta inodzokera kuDelta's air service roster ku SJC zvichitevera kutanga kwebasa risingamire kuMinneapolis-St. Paul (MSP) anobva kuSJC muna Chikunguru 19. Delta Air Lines yakamisa basa pakati peSJC neATL muna2020 nekuda kwedenda reCOVID-19 nekuderera kwekufamba kwakabatana.